Home Wararka Midowga Yurub iyo Mareykanka oo bilaabay olole ka dhan ah Maxamed...
[XOG] Midowga Yurub iyo Mareykanka oo bilaabay olole ka dhan ah Maxamed Farmaajo
Ururka Midowga Yurub iyo Dowladda Mareykanka ayaa bilaabay olole ka dhan ah musharaxnimada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida MOL aay ogaatay. Ololahan ayaa la sheegay in Yurub iyo Mareykanka aay ku cadaadinayaan Farmaajo in aanu is sharaxin si Soomaaliya looga badbaadiyo dagaal sokeeye.
Sida aan xogta ku helnay waxaa Mareykanka iyo Midowga Yurub aay ogaadeen in Farmaajo aanu ku tala jirin in uu wax ka bedelo mowqifkiisii hore, wuxuuna qorsheynayaa in Doorashada aay noqoto mid uu dhiig ku daato haddii uu waayo sida uu isaga rabo.
Farmaajo ayaa ka dhaga adeygay talooyin aay Mareykanka iyo Yurub u soo marsiiyeen Qatar taasoo la sheegay in aay ahayd in uu si degen awoodda Doorashooyinka ugu wareejiyo RW Rooblem, balse ilaa hadda ma jiraan awood toos ah oo lagu wareejiyay Rooble.
Farmaajo ayeey ahayd in ugu danbeyn bisha May 10 uu ku dhawaaqo go’aankiisa in uu yahay Musharax iyo in aanu ahayn, taasoo uu ka cabsi qabo haddii uu ku dhawaaqo in uu musharax yahay laga wareejinayo awooda Madaxweyne. Haddii uu ku dhawaaqo in aanu musharax ahayn waxaa uu ka cabsi qabaa in aay ka wada tagaan taageerayaashiisa Doorashada.